Kooxo hubeysan oo garsoore ku dishay magaaladda Laascaanood
Nabad-gelyadda magaala madaxda gobolka Sool ayaa u muuqata mid faraha kasii baxeysa.
LAASCAANOOD, Sool – Dabley ku hubeysan bastoolado iyo qoryo ayaa xalay magaaladda Laascaanood ku dishay garsoore ka tirsanaa Maxkamadda xarunta gobolka Sool, sidda ay ku warameen goobjoogeyaal kala duwan.
Sidda ay muujinayaan warbixinadda ka imaanayaa dadka degaanka iyo saraakiisha ammaanka, Cabdullaahi Salaad Wadaad-yarre ayaa salay saqdii dhexe la toogtey xilli uu sii galayey hoyga uu ka degan yahay halkaas.
Jaamac Nuur Axmed, oo kamid ah dadka degaanka isla markaana garanayey marxuumka, ayaa u sheegay Garowe Online in qoyskiisu qorsheynayaan in ay aasaan Arbacadda maanta ah.
"Wuxuu ahaa qof degan oo wanaagsan. Waxaa lii sheegay in uu ku dhintay isla goobta ay gacan ku dhiigleyaasha ku beegsadeen," ayuu ku daray.
Ma jirto koox illaa haatan dusha saaratay mas'uuliyadda falkaas. Saraakiisha nabad-gelyadda way ka gaabsadeen in ay ka warbixiyaan.
Bishii Maaj 2-deeda, sanadkan 2020, Gudoomiyihii maxkamada gobolka Sool, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa lagu dilay qarax ka dhacay gudaha magaaladda. Ma jirto koox sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas.
Isla bishii Maaj 17-keeda, kooxo hubeysan ayaa gudaha Laascaanood ku dishay Taliyihii Ciidammada sirdoonka gobolka Sool ee Somaliland, Cabdiqani Guhaad Xasan. Dableyda way ka baxsatay meesha ay wax ka dhaceen.
Falalkaan liddiga ku ah ee kusoo batay Laascaanood ayaa kusoo hagaagaya xilli horaantii sanadkan ay soo baxeen warar sheegaya in xubno Al-Shabaab ah lagu arkay degaano ka tirsan gobolka Sool ee waqoyga Soomaaliya.
Taliyihii sirdoonka gobolka Sool oo lagu "dilay" Laascaanood
Somaliland 16.03.2020. 22:30
Marxuumka ayaa waxaa lagu waramay in lagu toogtay nawaaxiga hoygiisa.
Xiisad ka taagan Tukaraq iyo Ciidamo ku wajahan
Puntland 09.01.2018. 15:36
Somaliland 04.11.2017. 00:06
Mas'uul ka tirsan Somaliland oo qarax gaari lagu khaarijiyey
Somaliland 02.03.2020. 18:38
Somaliland 17.03.2020. 15:05